दसैँमा मासु छान्दा के–के कुरामा ध्यान दिने ?
नेपाल लाइभ आइतबार, असोज १९, २०७६, ०७:३०
मासु पोषिलो खाना हो। तर धेरै खानाले यसले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ। नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले बिरामीले मात्र होइन, स्वस्थ व्यक्तिले पनि मासु खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
दसैँका बेला मासु यति खानुपर्छ, उति खानुपर्छ भनेर सुझाव दिएको देख्दा अचम्म लाग्ला। कतिपयलाई त रिसक पनि उठ्छ होला। तर, आज टन्न खाएर भोलि पछुताउनुभन्दा बेलैमा सचेत हुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। आवश्यकताअनुसार मात्रै मासु खाएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। चाडबाडमा चाहिनेभन्दा बढी मासु खाएर वर्षभरि अस्पताल धाउनुपरेका घटना थुप्रै छन्।
मासुबाट पूर्ण पोटिन प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन शरीरिक विकासका निमित्त अति नै आवश्यक हुन्छ। प्रोटिन बन्नका लागि चाहिने अमिनो एसिड मासुमा पूर्ण रुपमा पाइन्छ। मानव शरीरभित्र बन्न नसक्ने तर खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने १० वटा एअमीनो एसिड हुन्छन्, त्यो मासुबाट वा जनावर स्रोतबाट पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मासु प्रोटिनको मुख्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि धेरै खायो भने शरीरमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। आवश्यक रुपमा खायो भने यसले पोषण प्रदान गर्छ। र, अनावश्यक रुपमा खायो भने नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ, विभिन्न रोग लाग्छ।
हामीले जनावरको टाउकोदेखि पुच्छरसम्मका सबै अंगको मासु खाइरहेका हुन्छौं। तर, त्यस्तो मासु खाँदा कसरी खाइराखेका छौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले खाने गरेका सबै अंगको मासु शरीरका लागि स्वास्थ्य कर छन् त?
मासु मानिसलाई मात्र होइन, जिवाणुलाई पनि उत्तिकै मन पर्छ। यदि मासु खुल्ला ठाउँमा १÷२ घण्टा राखियो भने त्यो मासुमा जिवाणु उत्पन्न हुन्छन्। धेरै समुदायले दसैँको बेलामा काँचो मासु साधेर खाने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो मासु खानु त्यति उपयुक्त हुँदैन। काँचो माुले अपच हुने, पेट फुल्ने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। यदि त्यस्तो मासु खानै प¥यो भने तोरीको तेलमा झानेर खानु उपयुक्त हुन्छ। यदि पाचन प्रणलीमा कुनै समस्या छैन भने मात्र यस्तो मासु थोरै मात्रामा खाना सकिन्छ, तर पोषणको हिसाबले उपयुक्त हुँदैन।
दसैँको बेलामा सबै पसल बन्दा हुने भएकाले एकै पटक ५/६ दिनलाई पुग्ने मासु ल्याउने गरिन्छ। धेरै मासु एकै पटक ल्याएर राख्दा त्यस्तो मासुमा छिट्टै जिवाणु पर्ने भएकाले कस्तो मासु ल्याउने, कहाँबाट ल्याइँदैछ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मासु सफा र स्वस्थ जनावरको ल्याउने र सफा पानीले राम्रोसँग पखालेर पकाउने र बाँकी मासु हावा नछिर्ने बनाएर प्याक गरी फ्रिजमा तापक्रम मिलाएर राख्नुपर्छ।
परिवारका सदस्य दीर्घरोगी भएमा खानामा मासु मात्र पकाउनु हुँदैन। त्यसैले मासुको सट्टा माछा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। माछामा प्रोटिन, भिटामिन र खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हुन्छ। ओमेगा फ्याटी एसिडका कारणले माछा स्वस्थ्यकर मानिन्छ। यस प्रकारको फ्याटी एसिडले रगतमा राम्रो कोलेस्टेरोल बढाउँछ। नराम्रो कोलेस्टेरोल लाइट ट्राइग्लिसिराइडको परिणाम कम गर्ने भएकाले मुटुसम्बन्धी रोग कम गर्न मद्दत गर्छ।